ग्राउण्ड रियालिटी : कास्की २ का मतदाता सोध्छन् ''साँच्ची के को चुनाव हुँदै हो बाबु ?'' | Jukson
पोखरा, २५ कार्तीक
पोखरा महानगरपालिका वडा नं ४, गणेशटोलमा नेकपाका उम्मेदवार विद्या भट्टराई सहितको टोली भोट मागिरहेका थिए । त्यहि भिडमा विहानको घाम ताप्दै वसेकी एक ८२ वर्षिया पुरै फुलेकी वृद्धासँग उम्मेदवार विद्याले आर्शिवाट दिनुस् भन्दै शिर निहु¥याईन् उनले भनिन–“मनले चिताएको पुगोस् ।” उनिहरु फर्किए त्यसपछि जक्सन डटकमले उनै वृद्धा नन्द कोईरालालाई सोध्यो किन आर्शिवाद दिनु भएको आमा–“खै आर्शिवाद मागे मैले दिए अरु त के थाहा वावु ?” उत्सुक हुदै उनले सोधिन्–“साच्ची वावु के हो र ? मैले भने–“ चुनाव हुँदै छ त्यहि भएर भोट माग्न आएका हुन् ।” उनिमा झन् उत्सुकता थपीयो अनि पुन सोधिन्–“साच्ची वावु चुनाव त अस्ती भर्खर भएको होईन र फेरी के को चुनाव हो ?” भोट मागे तर, उनलाई के को र कहिले चुनाव भन्ने नै थाहा छैन ।
उनि मात्रै होईन गैहपाटन निवासी ८३ वर्षिया आनन्द कोईरालाले पनि त्यहि कुराको गुनासो गरिन् । उनले भनिन–“आए आर्शिवाद मागे तर किन र के कुराको लागि हो भन्दै नभनि हिडे, चुनाव रहेछ वावुवाट थाहा पाए ।” २ दिन अगाडी मात्रै साझा पार्टीले पनि भोट मागेछ तर त्यसले पनि कुनै कुराको जानकारी नदिई हिडेछ । सोहि वार्डमा एक दिन अगाडी मात्रै नेपाली काँग्रेसले पनि मत मागिसेकेको छ तर, जेष्ठ नागरिकहरुमा एउटै समस्या छ । किन चुनाव हुँदै छ ? अहिले कास्की जिल्लाको क्षेत्र नं २ मा चुनाव लागेको छ । तर, जति पनि उम्मेदवार आएका छन् सवैले आफ्नो लागि मत मागेका छन् कहिले र के हुदै हो किन चुनाव हुन लागेको हो भन्ने वारेमा कुनै जानकारी दिएका छैनन ।
मंसीर १४ गते हुने उप निवार्चन आउन अव १९ दिन मात्रै वाकी छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाका आधरमा अहिले उम्मेदवारी दर्ता गराएका २१ जना नै आफ्नो पक्षमा मत माग्न सुर्यको किरणसँगै सुरु गरेर सुर्यको अस्तसँगै सक्ने गरेका छन् । अधिकतम दलहरुले आज सम्म २ देखी चार वटा सम्म वडाहरुमा मत माग्ने काम सकेका छन् भने निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने अन्य वडाहरुमा पनि घरदैलोको अभियान चलाउने तालिका अनुसार सडक सडक कुदिरहेका छन् ।
नेकपाका कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापा सवै उमेर समुहका मतदातालाई सवै कुराको जानकारी दिनु पर्ने धारणा राख्दै समस्या भएको भएमा सुधारेर अगाडी वढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने–“हामीले सम्भव भए सम्म सवैलाई आउदै गरेको उप निर्वाचनका वारेमा जानकारी दिने गरेका छौं कहि कतै छुटेको भएमा सुधारेर अगाडी बढ्नेछौं ।” त्यसोत नेपाली काँग्रेस कास्कीका प्रचारप्रसार संयोजक नविन सिग्देलले पनि सवै समक्ष सवै कुरा नभनेको स्विकार गरे । उनले भने–“कसैले सोधेमा हामीले सवै कुरा भनेका छौं तर कुनै मतदाताले नसोधेको अवस्थामा हामीले भनेका छैनौं ।” जेष्ठ नागरिकहरुमा पुर्ण जानकारीको समस्या हुन सक्छ त्यस्ता खालका गल्तिलाई अन्य वडाहरुमा सुधार्ने पनि उनको भनाई थियो । त्यसोत आफूलाई वैकल्पिक राजनीति भन्न रुचाउने साझा पार्टीको पनि उहि समस्या रहेको छ ।
भोट माग्ने तर किन कहिलेको लागि भन्ने कुरा विर्सेर हिड्ने । साझा पार्टीका कास्की जिल्ला संयोजक अर्जुन खनालले भने–“हामी कास्कीका कतिपय मतदातासँग नया छौं त्यसैले पहिलो चरणमा हामीले तराजु र साझा चिनाउँदै हिडेका छौं, दोश्रो चरणमा अर्को टिमले मतदाता शिक्षाका वारेमा सवै कुरा भन्दै आउछ ।” त्यसो त निर्वाचन कार्यालय कास्कीले पनि एक हप्ताको टोल टोलमा मतदाता शिक्षा दिने तयारी गरीरहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी महेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने–“हामी सवै मतदाताको घर घरमा त मतदाता शिक्षा दिन नसकिएला तर टोल टोलमा एक हप्ताको अभियान चलाउँछौं ।” प्रत्येक वडामा २ जना कर्मचारीहरु खटाएर पोष्टर पम्प्लेट र अन्य तरिकावाट पनि मतदाता शिक्षा दिने पनि उनको भनाई थियो ।
राप्रपा (संयुक्त) ले धार्मिक जागरण यात्रा गर्ने
भारतविरुद्धको प्रदर्शनमा नेविसंघले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा